» हेटौँडाका यी स्थानमा सर्न सक्छ फुटपाथ र सवारी पार्किङ, अटो र मयुरीलाई कता ?
हेटौँडाका यी स्थानमा सर्न सक्छ फुटपाथ र सवारी पार्किङ, अटो र मयुरीलाई कता ?
२०७४, २४ माघ बुधबार १५:४७
मकवानपुर, २४ माघ । ३ नम्बर क्षेत्रको अस्थायी राजधानी मकवानपुरको हेटौँडामा अहिले सवारी तथा फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि तिब्र तयारी चलिरहेको छ । फागुन १ गतेबाट पूर्ण रुपमा फुटपाथ हटाउने निर्णयमा पुगेको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले सवारी पार्किङ र फुटपाथ व्यवस्थापनको लागि केही स्थानहरु विकल्पको रुपमा प्रस्तुत समेत गरेको छ । तर ती स्थानहरु फाईनल भने भइसकेको छैन ।
‘भुटनदेवी स्कूलको चौर’
छलफलका क्रममा भुटनदेवी स्कूलको चौरलाई पार्किङ तथा ठेला व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्नकालागि उपमहानगरपालिकाले लिन सक्ने देखिएको छ । त्यस क्षेत्रको हेटौँडा क्याम्पस नजिकै केही ठेलाहरुलाई व्यवस्थापन समेत गरिसकिएको छ ।
यस क्षेत्रलाई उपमहानगरपालिकाले भाडामा लिएर स्कूल रोडमा हुने गरेको डबल पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिएको छ । त्यस्तै अटो तथा मयुरीलाई पनि त्यहाँ पार्किङ गर्न सकिने छलफलमा कुरा उठेको छ ।
हेटौँडा राप्तिरोड क्षेत्र
‘हेटौँडा अस्पताल छेउको क्षेत्र’
अटो र मयुरीले जथाभावी पार्किङ नगरोस् भन्ने उदेश्यले हेटौँडाका राप्तिरोड क्षेत्रमा संचालन हुने अटोहरुलाई जथाभावी पार्किङ गर्न नदिई हेटौँडा अस्पताल क्षेत्रको खाली स्थानबाट संचालन गर्न सकिने समेत कुरा उठेको छ । त्यस्तै हाल अव्यवस्थित रहेको नवलपूर टेम्पो पार्कलाई समेत त्यहाँबाट संचालन गर्न सकिने बारेमा छलफल भएको छ । त्यसो गरेमा राप्तिरोड क्षेत्रको ट्राफिक समस्या हल हुने छ ।
सवारी व्यवस्थापनमा सहज होस् भन्ने उदेश्यले हेटौँडा क्षेत्रबाट संचालन हुने टिफरहरुलाई राप्ति किनारबाट संचालनमा ल्याउन सकिने बारेमा समेत छलफल भएको छ । यो सम्भव भए बर्खाका समयमा बाहेक अन्य समयमा राप्ति किनारबाट टिफर संचालन गर्न सकिने छ ।
बजार क्षेत्रमा भारी सवारी प्रवेश गर्न नदिने उदेश्यले रातोमाटेबाट कुखरेनी खोला हुँदै राप्तिपुलसम्मको बाईपासलाई प्रयोग गर्न सकिने अवधारणा समेत प्रस्तुत गरिएको छ । यसो गर्दा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको संचालित ढाड समेत त्यतै सार्नुपर्ने छ ।
‘हुप्रचौर र भैरव रोड’
ठेलालाई हेटौँडाको हुप्रचौर र मोटरसाईकल सर्भिस सेन्टरलाई भैरव रोडतिर सार्ने विषयमा समेत नगरवासीबिच छलफल भएको छ । सोही अवधारणा अनुसार बजारमा यत्रतत्र देखिने केही ठेलाहरुले हुप्रचौर क्षेत्रमा आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाईसकेका छन् ।
‘फुटपाथ तथा ठेलालाई उचित स्थान’
सवारी र फुटपाथ व्यवस्थापनकै लागि केही व्यवस्था र सुविधा सहित फुटपाथ र ठेलालाई उचित स्थानमा सारिने बारेमा समेत छलफल भइरहेको छ । साथै फुटपाथलाई केही समय निश्चित स्थानमा राख्ने गरि २ घण्टे बजारका अवधारणाहरु समेत छलफलमा निस्किएको छ ।
‘मोटर साईकल रिपेयरिङ र सर्भिस सेन्टरलाई सारिने’
मोटरसाईकल रिपेयरिङ र सर्भिस् सेन्टरका कारण जताततै कालो देखिने कारण यसलाई मूख्य बजारबाट केही पर नै राख्ने बारेमा समेत विचार विमर्श भएको छ । यस अवधारणा अनुसार मूख्य बजारबाट केही निश्चित दुरीमा मात्र यस्ता व्यवसाय संचालन गर्न सकिने छ ।